Avianca Airlines inopinda mugore rayo rechigumi rekusagadziriswa kushanda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Avianca Airlines inopinda mugore rayo rechigumi rekusagadziriswa kushanda
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Muna 2019 Avianca Airlines inopemberera gore -gumi yemakore. Inosimbisa chinzvimbo chayo sendege yekare kudhara muAmerican uye yekare kudhara pasingadzongonyedzwe mashandiro.
Kuti ugadzire hwaro hwezana ramakore rinotevera, Avianca inoda kuwedzera kuvepo kwayo muEurope uye kuramba ichipa chiitiko chakasarudzika kune vatengi vayo vanotsigirwa neyakanakisa tekinoroji inowanikwa.
"Tiri kuongorora mukana wekuwedzera wechipiri frequency kuLondon munguva pfupi iri kutevera," anodaro Hernan Rincon, CEO uye Executive President weAvianca Airlines. "Pamusoro penzvimbo nyowani, Zurich inoratidzika seyakanaka senzvimbo inotevera kuEurope nekuda kwenzvimbo yayo iri pakati peEurope. Uyezve, iyo ndege iri kuongorora Roma neParis, ”akawedzera
Avianca Airlines inochengetedza huvepo hwakasimba muEurope kuburikidza nezviito zvakasiyana.
1. New Boeing 787: Musi waGumiguru 2018, Avianca yakagamuchira yayo yegumi nematatu Boeing 787, iyo yainoshandisa chete nendege dzinoenda kuEurope. Ngarava dzayo ndeimwe yezvitsva muAmerican - makore manomwe ekuberekwa paavhareji- uye nendege dzayo dzese kuenda kukondinendi ino dzinoshanda paBoing 787, imwe yendege dzazvino kwazvo pasi rose.
Iyi ndege inogona kutakura vafambi mazana maviri nemakumi mashanu, makumi maviri nemasere mukirasi yebhizinesi uye makumi maviri nevaviri mukirasi yehupfumi. Yayo echimisikidzo dhizaini, pamwe neyekucheka matekinoroji, inoderedza mhedzisiro yekuneta uye jet lag. Uye zvakare, ine hunyanzvi mu-nendege varaidzo sisitimu, iyo inozivikanwa seyakanakisa muLatin America. Zvese pamwechete zvinopa kune yakasarudzika ruzivo.
2. Route network: Kubva kuBotota, nzvimbo huru yeAvianca, vatakuri vekuEurope vanokwanisa kuwana zvinopfuura nzvimbo zana mukati meAmerica senge: Cusco muPeru, Galapagos kuEcuador, San Jose kuCosta Rica, Medellin neCartagena muColombia, pakati pevamwe. Musi waNovember 100, ndege iyi yakavhura nzira Munich - Bogota. Inotakura ndiyo yekutanga ndege yeLatin America kushanda panhandare iyi.
Avianca yave ichizivikanwa seYakanakisa Ndege muSouth America: zvese zviri zviviri zvekufamba kwenguva refu uye nendege diki dzeSkytrax, Trip Advisor, APEX, pakati pevamwe, nekuda kweruzivo rweiye mufambi wayo kubva pashumiro yepasi uye nhandare kuenda mu-ndege yebasa.